Waa kuwee waxa aad jeceshahay, mooto Electric ama Iskeetboodhyada - Jomo Technology Co., Ltd
Waa kuwee waxa aad jeceshahay, mooto Electric ama Iskeetboodhyada
Dukaamada online badan ayaa bilaabay bixiya mootooyinka is miisaamid iyo hoverboards mar kale. Mooto Silent keenayaa fillooyinka, ra'iisul tayo waddo-sharci, ka Koowheel green electric scooters dhoofin in Europe. jejebiyey gacanta ama lugaha ku shaqeeya u fasaxaya in aad joojiso mooto ah isla dhiigdaadinla'aan dheelitirka. Iyada oo ka shaqeynayaan this aad u yeelan doontaa hortiisa inuu ka tago aad mooto xasiloonida iyo marnaba ka cabsan in qof u fuuli doonaa sida ayaan shaqayn doonin illaa hal mar ka badan aad riixdid batoonka. Kuwan waxaa loo dhisay in heerarka aad u sareeya, kuwaas oo gaadiidlayda gaarka ah waa la dhisi doonaa, oo waxa aanu wax ka mid ah walaac ammaanka in tiro ka mid ah noocyada yar leeyihiin. mootooyinka ayaa sidoo kale ka dhigay in mabda'a isku mid ah marka microprocessors ka bedel maan markab calaamada si motor ah.
Gaadhi curyaanku candho- Electric xitaa noqon kartaa ammaan badan baaskiilada tan iyo markii ay sida caadiga ah laga sameeyey qalab caag adag oo aan haysan lahaa in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo badan oo jirka ah in uu sababi karo dhaawac iman kara. Ka dib markii laga yaabaa in dhameystirtay kula tutorial fuushanba ka dibna waxaad qaadan kartaa farxo oo dhan muuqaalada app ah. Maxay yihiin fursadaha saddex mooto ugu wanaagsan ee dhalinyarada? Maxaa yeelay, kala-goysyada abuuro badan yihiin waajib ku riixo dhaawac keeni kara in arrimaha dhaawac carjawda iyo muddada-dheer, takhaatiirta carruurta ayaa soo jeedinaya jimicsi saamayn hooseeyo, gaar ahaan da 'yarta u buuran, kuwaas oo kala goysyada waa hore u halis. Yaa doonaya inuu ku socon marka aad u yeelan doontaa in dhexsocoto, sax ah? Hoverboards sidoo kale kala duwanaan karaan gudahood kala duwan ee giraangirihii. Badan ayaa geeyey si toos ah uga soo Shiinaha si qaadan doontaa 7-12 maalmood si ay u yimaadaan gudahood Maraykanka. Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah si degdeg ah, waxaad ka qaadan kartaa hoverboard ee our bakhaarka dibada. Halka da'da yar iyo dadka waaweyn badan waxaa loo isticmaalaa in fuushan baaskiilada in ay leeyihiin biriiga taayirrada hore, Fariin gadaal banjarin waa ka sii ammaan iyo yaraynaysaa halista ah ee mid ka mid ah wax yar la tuuro ka hor halka joojinta isla markiiba. Its loogu talagalay taayirrada xidhnayn weyn mid ka mid ah maamulka ugu wanaagsan oo gacanta ku dhawaad dusha kasta, xataa badda xeebteeda taal! Wixii intaa jira maamulka fog yar oo awood aad si loo xakameeyo soo skeidgareeyo Electric.
Waxaan muhiimad dhahnaa shaqaalaha design ugu xirfad iyo khibrad leh ee waaxda, iyo xataa waxaan leenahay khibrad patent dhexdhexaad ah oo muhiim ah, qalabka baaritaanka sare oo saldhig saarka kaas oo hubinaya in wax soo saarka midig. Waxaa jira in badan oo caanka ah iyadoo la isticmaalayo qalab this is-dheelli iyo qalab this koray si ay u noqdaan arrimaha iibsiga fasaxa ugu codsaday iyo kor u qaadida fiican sanadkan (2018). E1 ugu weyn marsiiyey by dadka dhallinyarada ah ugu. Just talaabo on, waxaad yeelan doontaa awood u leh inay u Safartaan daqiiqo, maalin waxbarasho saaran yahay oo kaliya 3-5 daqiiqo. Haddii aad fuushan daal, waxaa laga dhigi karaa hanta. Sidaas darteed waa mid aad u sahlan.
Kale waa lagu skeidgareeyo wireless fog korontada la giraangiraha badeli PU design gaar ah caawin doona matoorrada qaboojinta maximumly Max Speed 42km / h, iyadoo dunida oo dhan keentay, weerarada iyo shuqullo waafaqsan ka fiirsaneysa inay dadka. Shaqaalaha ayaa ka dambeeya skeidgareeyo this waxa uu ugu yeerayaa "ee lagu skeidgareeyo korontada kama dambaysta ah ," oo aan ka joogno arinta ku saabsan in la arko sababta. The KOOWHEL Electric skeidgareeyo haatan yimaado la dual matoorrada! Skeidgareeyo Electric waa deegaan more saaxiibtinimo, dheeraad ah muuqata in koorsada saacadaha soo wariyay in. Waxaad ka iibsan kartaa batari dheeraad ah. haddii, aad ha ka welwelin ku saabsan qulqulaya ka batteriga ka dib markii la isticmaalayo.
waqti Post: Feb-01-2018